အကြွေးဆပ်ပေးသူကပိုချမ်းသာလာတယ် - Bhikkhu Revata - Afrikhepri Fondation
အကြွေးဆပ်သူသည်ချမ်းသာလာသည် - Bhikkhu Revata
အဆိုပါငါပို့ဆောင်တော့မယ့်သင်ကြားမှုဟာ Samyutta Nikaya မှ Soutta Antevasika အပေါ်အခြေခံသည်။ Antevasika သည်အတွင်းတပည့်ဖြစ်သည်။ လောက၌ (၈) ပါး၌တပည့်သည်အဘယ်မှာထိုင်ပါသနည်း၊ ကမ္ဘာ့အခြေအနေ (၈) ခုဆိုတာဘာလဲ။ ၎င်းတို့သည်အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှု၊ ဂုဏ်ကျက်သရေနှင့်ကျဆင်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်နာကျင်မှု၊ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခြင်းများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်သည်အတွင်းတပည့်အားဤကမ္ဘာလောကအခြေအနေ (၈) ခုအနက်မှတစ်ခုအတွင်း၌ထားပါကသူသည်ဘုန်းအသရေနှင့်ကျဆင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာနောက်လိုက်များများနှင့်နောက်လိုက်များနည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာများတွင်ကျောင်းသားများရှိသည်၊ ဘုန်းတော်ကြီးများတွင်တပည့်များရှိသည်။ ကျောင်းသားများနှင့်တပည့်များသည်သူတို့၏နောက်လိုက်များဖြစ်ပြီးကျောင်းသားနှင့်တပည့်များစွာရှိပါကသူတို့သည်အလွန်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။ ဘယ်သူကနောက်လိုက်တွေမများစေချင်ဘူးလဲ။ ဒီမှာရှိတပည့်များသည်အတွင်းတပည့်ဖြစ်သည်။ အတွင်းစိတ်တပည့်များရှိခြင်းကကောင်းပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ မင်းဘာပြောတာလဲ
အတွင်းတပည့်တွေရှိတာကောင်းတယ်၊ မကောင်းဆိုတာသူတို့ကိုငါပိုင်လို့ငါသိတယ်။ ဒီညဒီမှာမင်းအများစုဟာအတွင်းတပည့်တော်တွေလိုချင်သလိုခံစားရတယ် ဗုဒ္ဓသည်အတွင်းတပည့်တော်အကြောင်းကိုပြောသောအခါသူသည်နောက်လိုက်များပေါများခြင်းလော၊ နောက်လိုက်များ၏ရှားပါးမှုကိုရည်ညွှန်းသလား။ ဒါကိုနက်နက်နဲနဲလေ့လာရမယ်။ ဒီညဗုဒ္ဓအမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာမင်းကိုပြောပြမယ်။ ဗုဒ္ဓကကျွန်ုပ်တို့အားဗုဒ္ဓဟောကြားထားသည့်အရာများအားသင်၏မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအလေးအနက်စဉ်းစားစေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အာမခံပါသည်။ ဤဓမ္မသည်အနှစ်သာရအားဖြင့်အလွန်ကြွယ်ဝသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဗုဒ္ဓ ၀ ါဒကိုရွတ်ဆိုခြင်းအားဖြင့်စတင်မည်။
ရဟန်းတို့အနန္တဝိကိရက္ကမက၊ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်၊ Anantevā siko, bhikkhave, ဘုန်းတော်ကြီးanācariyako sukham phāsu viharati ။ "
"ရဟန်းတော်များ, ဤသနျ့ရှငျးဘဝအတွင်းဆရာမပါဘဲမိုးလုံလေလုံတပည့်ခြင်းမရှိဘဲနေထိုင်ခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ တပည့်များနှင့်အတွင်းပိုင်းဆရာမနှင့်အတူတစ်ဦးကဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆငျးရဲဒုက်ခနှင့်မိဿဟာယမရှိဘဲနေထိုင်ပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးများ, တပည့်များနှင့်အတွင်းပိုင်းဆရာမရှိဘဲဘုန်းတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ "
မြတ်စွာဘုရားသည်ဤလောက၌စေတနာ၊ သနားခြင်းဖြင့်ဟောကြားတော်မူ၏။ ဗုဒ္ဓကကျွန်ုပ်တို့သည်အတွင်းတပည့်မပါ၊ အတွင်း၌မာစတာမပါဘဲသန့်ရှင်းသောဘ ၀ ကိုကျင့်သုံးသင့်သည်ဟုပြောခဲ့ပါက၊ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ဗုဒ္ဓဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုချက်ချင်းနားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဗုဒ္ဓကထပ်မံမိန့်ကြားသည်ကိုနားထောင်ပါ။
"သူတပည့်အဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးအတွင်းဆရာ, ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်တကွ, နာကျင်မှုနှင့်အတူနာကျင်မှုနှင့်အတူလေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်။ , ထိုတပည့်ခြင်းမရှိဘဲအတွင်းပိုင်းဆရာကျင့်သောသူသည်, စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်အတူဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ထိုသို့ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးတှငျနထေိုငျနိုငျသညျ။ "
Soutta ဗုဒ္ဓခုနှစ်တွင်လည်း said:
“ ကြိတ်ခွဲစက်ကဲ့သို့သောပြန်လည်ရှင်သန်မှုပတ် ၀ န်းကျင်မှဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်မှာ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းကောင်းများ၊ ဆရာကောင်းများနှင့်ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်များအပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။ ”
ဗုဒ္ဓကသာလျှင်မြတ်သောဘ ၀ ကိုအတွင်းတပည့်မပါ၊ အတွင်းဆရာမပါဘဲကျင့်သုံးသူသည်ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုပါကဤဖော်ပြချက်နှစ်ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင်နေပုံရသည်။ ဒါဟာ conundrum နဲ့တူတယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဗုဒ္ဓဟာအတွင်းတပည့်တော်နဲ့အတွင်းစိတ်ဆရာကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာအတိအကျသိဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေထိုင်နေတယ်ဆိုတာသိပြီးကြည့်ရမယ်။ ငါတို့ဘယ်လိုနေထိုင်နေတယ်၊ ​​ဘယ်လိုစိတ်သဘောထားမျိုးကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလဲ။
အခုတော့သက်ရှိသတ္တဝါတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘ (လောဘ)၊ မုန်းတီးခြင်း (dosa) နှင့်လှည့်စားခြင်း (moha) တို့၏ညစ်ညူးမှုများဖြစ်သည်။ ငါတို့အတွင်း၌လည်းငြူစူခြင်း၊ avarice (issamicchaya) နှင့်မာနထောင်လွှားခြင်း (မာန) ရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤညစ်ညမ်းမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည့်အရာသည်နှစ်လိုဖွယ်သို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သောအရာတစ်ခုကိုမြင်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်သံကြိုးများကဲ့သို့ချည်နှောင်ထားသောကျွန်ုပ်တို့တွင်မကျန်းမာသောပြည်နယ်များပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များ၊ အမှတ်တရများ၊ သဘောထားအမြင်များနှင့်ခံစားချက်များသည်အလွန်အလုပ်များပြီးမကျန်းမာသောညစ်ညမ်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ဤညစ်ညမ်းမှုများကျွန်တော်တို့ကိုနေထိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတို့နေထိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့ကိုအတွင်းတပည့်ဟုခေါ်သည်။ ဗုဒ္ဓကဤသို့သောအတွင်းစိတ်တပည့်များရှိသူများသည်စိတ်ဆင်းရဲစရာဘဝများဖြင့်နေထိုင်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ လောဘကြီးခြင်း၊ ငြူစူခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်းနှင့်မာနထောင်လွှားခြင်းတို့လည်းပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓကဤသို့သောတပည့်တော်များနှင့်သခင်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အခါမျှငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပစ္စည်းများစွာရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းရှားပါးလာနိုင်သည်။ ဒီအခြေအနေနှစ်ခုထဲကဘယ်ဟာကိုသင်ရွေးမလဲ သငျသညျသင်တန်း၏, များစွာသောချင်လိမ့်မယ်။ အလားတူစွာ၊ သင်သည်များစွာသောနောက်လိုက်များရှိခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာနောက်လိုက်များသာရွေးချယ်ခြင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့လျှင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိလိမ့်မည်လော။ ချမ်းသာခြင်းနှင့်ဆင်းရဲခြင်းကြား၊ ဂုဏ်အသရေနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းစပ်ကြား၊ မကောင်းတဲ့သူကိုဘယ်သူမှမလိုချင်ကြဘူး။ သို့သော်၎င်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေလူသားများသည်ကမ္ဘာ့အခြေအနေ (၈) ခုကိုအမြဲတမ်းလိုက်စားလေ့ရှိပြီးထိုနည်းအတိုင်းပင်လူသားများသည်နောက်မှလိုက်ကြသည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများ၊ နောက်လိုက်များနှင့်နောက်လိုက်များရှားပါးခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခြင်းများဆန့်ကျင်မှုပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါတိုင်း၊ ၀ မ်းနည်းခြင်းနှင့် ၀ မ်းနည်းခြင်းဆန့်ကျင်ဘက်များပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့မှာအတွင်းလူတပည့်ဖြစ်တဲ့မာစတာရှိတယ်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာ၊ ဂုဏ်အသရေ၊ ဂုဏ်အသရေရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်ရွှင်မှုခံစားရသော်လည်းထိုသို့သောဆန့်ကျင်ဘက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ခံရသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုကိုခံစားကြရသည်။ ပျော်ရွှင်မှုရှိလျှင်စိတ်ဆင်းရဲမှုလည်းရှိလိမ့်မည်။ သင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံလိုလျှင်ဝမ်းနည်းမှုခံစားရရန်မျှော်လင့်ရမည်။ အတွင်းတပည့်နှင့်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အတွင်းတပည့်ဖြစ်သောမာစတာရှိသူအားလုံးသည်ပျော်ရွှင်ခြင်း၌ ၀ မ်းနည်းခြင်း၊
ဒီပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း, စားပျက်အပိုင်အတွက်ဖြစ်စေအကြွေးတွေအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်ဖုန်နှင့်အတူတစ်ဦးဖြစ်တည်မှုအကြွေးတွေအပြည့်အဝတစ်ဦးအသက်ပေတည်း။ သင်သည်သင်၏ကြွေးရှင်သည်သင်၏အကြွေးတွေပြန်ဆပ်ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မည်သည့်အခါကိုကွောကျရှံ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ lobha (လောဘ) ရှိခြင်းသည်အကြွေးတင်နေသည်နှင့်တူ၏။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင် lobha ဖယ်ရှားပစ်ရမည်မဟုတ်ကြဘူးသကဲ့သို့သင်တို့မရတဲ့အကြွေးတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကြွေးရှင်ရုံမြီစားထံမှအကြွေးတွေစုဆောင်းသကဲ့သို့, အစွန်းအထင်းသင်မြှုတ်ထားသောကြွေးမြီတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ "ငါကကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်း! "- ဤကြွေးမြီ layout ကိုဖြစ်ပါတယ်။ "အမျှနာကျင်! "- ဒီအကြွေးတွေ၏ပြန်ဆပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြင့်နှလုံးခုန်သံကိုခံစားရန်၊ ငါတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ၏ဘေးတွင်ရှိနေရန်၊ ထိုသို့သောသူ၏အသံကိုကြားရန်၊ အရာများသို့မဟုတ်သတ္တဝါများအတွက်မိမိကိုယ်ကိုဖြုန်းတီးရန်၊ တပ်မက်စိတ်၊ အခြားသူများထံမှနားလည်မှုကိုရှာဖွေရန်၊ တပည့်များ၏အောင်မြင်မှု၊ ဘုန်းအသရေ၊ ဤခံစားချက်နှင့်ဆန္ဒများအားလုံးသည်တွယ်ကပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝကနေတဆင့်လမ်းကိုပြောင်းလဲနေကြသည်။ ဒီတော့ lobha အတူအားလုံးအကြွေးဆပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါ့အပြင် dosa (မနှစ်သက်) နှင့်ပြည့်ဝ၏ရန်ပုံငွေစောင့်ဆိုင်းနေသည့်ကြွေးမြီများနှင့်တူသည်။ သငျသညျဆန့်ကျင်ကှကျဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လျှင်, သင်အမြဲပြန်ဆပ်ဖို့ကြွေးမြီရှိသည်လိမ့်မယ်။ ကွှေးသည့်မြီစားနှောင့်ယှက်နေသည်အဖြစ်အစွန်းအထင်း dosa သင်နှောင့်ယှက်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အထီးကျန်ဆန်ခြင်း၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်း၊ နာကြည်းခြင်း၊ လက်စားချေခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဖိနှိပ်မှု။ အဘယ်ကြောင့်ဤအပြုအမူများနှင့်ခံစားချက်များကိုအမျိုးအစားများကိုဖြစ်ပေါ်သလဲ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီတွင်လူသားများသည် dosa ၏ယိုယွင်းနေသောကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနက်ရှိုင်းစွာအကြွေးတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကပြည်တွင်းတပည့်ရှိသည်။ ကြီးမားတဲ့ကြွေးမြီရှိခြင်းတူ, မနာလိုလောဘသို့မဟုတ်ဂုဏ်ယူရလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်ဤညစ်ညူးခြင်းနှင့်ပပျောက်ရေးမနိုင်လျှင်, သင်အမြဲပေးဆောင်ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေအကြွေးတွေရပါလိမ့်မယ်။ "သူ (သူမ) (င) စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ငါ့ကိုဖမ်းမိ! ငါ (လျှင်) ဒါကြောင့်အမျက်ထွက်တာပါ။ အဘယ်သို့ငါကသူ၏အောင်မြင်မှုဖျက်ဆီးသလဲ? သူ့ကိုငါနှစ်သက်တဲ့လူတွေကိုငါမုန်းတယ်။ အပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုသာလာပါစေ။ သူတို့သညျငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုယူသလဲ? သူတို့ကိုငါငါ့အကြောင်းကိုထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာဟုမဆိုစေမှမခံနိုင်ပါ။ ငါသူကိုသူတို့အားပြသပါလိမ့်မယ်! သငျသညျအကြှနျုပျ၏အရိုအသေပေးချေရန်ရှိသည်မှအဘယ်သူနည်း ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်အတူမည်သူမဆိုသူတို့ပေးဆပ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုအကြွေးတွေယူသေချာပါသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကကြွေးမြီအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့, သင်သည်သင်၏အကြွေးခြင်းဖြင့်တရားစွဲနေကြသည်။ karmic အကြွေးတွေ - လူတစ်ဦးစီအကြွေးတွေစုဆောင်းခဲ့သည်။ အကြွေးတွေ kusala (အကြိုးပွုကငျြ့) နှင့် akusala ကြွေးမြီ (အကုသိုလ်ကငျြ့) ရှိပါတယ်။ kusala ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ဆန္ဒကိုလည်းခရက်ဒစ်၏ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်ပါစေ။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားသူများ၏အကျိုးအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်ကတိပြုထားပါက၊ ဤကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဝသည်အခြားသူများ၏အကျိုးအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်။ သင်အဘို့စေလိုကြောင်းသောကြောင့်, ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုကြွေးမြီသည်အကြွေးဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗုဒ္ဓသည်လူသတ္တဝါတို့၏စိတ်ကိုအလင်းပေးစွမ်းနိုင်သည့်ပါရမီဖြည့်စွက်ရန်လေးသိန်း (မရေမတွက်နိုင်သော) ဥယျာဉ်များကိုကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောထူးခြားသောသတ္တဝါကျူးလွန်နိုင်အကြွေးတွေ၏မျိုးအတော်လေးအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သူတို့ကထိုကွောငျ့, သူတို့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသောအဘို့မိမိတို့အခွန်အခပေးဆောင်ခဲ့ရသည်ကိုမိမိတို့အဘို့ဤအဆန္ဒကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအကြွေးတွေအားလုံးကောင်းသောအကြောင်းတရားများအဘို့, ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် akusala (အကုသိုလ်ကငျြ့) အတွက်ပေးဆောင်သည့်ကြွေးမြီကြီးမားများမှာ! သူတို့ဟာအလွန်ကြမ်းတမ်းပြစ်ဒဏ်ခတ်, အကြီးအကျယ်, သည်းမခံခြင်းနှင့်သေစေလောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကကျနော်တို့အဟောင်းများကို Boddhisatta ၏ဘဝတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာငါတို့မြင်အရာဖြစ်တယ်။ သူသည်ဤတည်ရှိမှုများအတွင်းရင့်ကျက်မှုမရှိခြင်းကြောင့်သူသည်အကြွေးတင်နေသောလောဘကြီးခြင်း၊ ရွံရှာခြင်း၊ မှားယွင်းခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်း၊ သူကပင်မိမိအသစ္စာဉာဏ်အလင်းပြီးနောက်, ပင်၎င်း၏parinibbāna (နောက်ဆုံးသုဉ်း) အားအပြည့်အဝက၎င်း၏အကြွေးတွေပြန်ဆပ်ရတယ်! ထွက်ပေါက်မရှိလမ်းရိုးရှင်းစွာရှိခဲ့သည်။ ကျောနာကျင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်းတို့သည်ဤသို့သောပြန်လည်ပေးဆပ်မှုများဖြစ်သည်။ သူ၏အတိတ်ဘ ၀ များအနက်တစ်ခုမှာ Boddhisatta သည်ကျော်ကြားသောနပန်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ၏အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကြောင့်အငြိမ်းစားယူခြင်းခံရသော်လည်းသူသည်တိုင်းပြည်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောသူဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်မှုကြောင့်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်မာနထောင်လွှားခြင်းတို့ကြောင့်သူသည်လက်စွပ်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးပြိုင်ဘက်၏နောက်ကျောကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့သည်။ ။ ထို့ကြောင့်သူသည်ဉာဏ်အလင်းရှိခဲ့သည့်သူ၏နောက်ဆုံးတည်ရှိမှု၌ပင်သူသည် Akusala အားသူ၏ကံကြမ္မာကြွေးမြီကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရာတွင်နောက်ကျောနာကျင်မှုခံစားခဲ့ရသည်။ မိမိအအတိတ်ကဘဝကိုနောက်ထပ်မှာတော့သူဟာငါးမျှားရွာ၌နေထိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့တွင်သူသည်ကလေးဘဝမှငါးဖမ်းရာမှပြန်လာသည့်အခါသူ့မိဘများနှင့်အခြားရွာသူရွာသားများသည်ငါးများခေါင်းပေါ်တွင်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုကြည့်။ အလွန်ဝမ်းသာခဲ့ကြသည်။ lobha တာဝန်ခံ၌ဤကောက်သောပျော်မွေ့ခြင်းအဘို့အကြွေးမြီဗုဒ္ဓ၏သူ၏အသက်တာကာလအတွင်းခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရသဖြင့်ဆပ်ခဲ့သညျ။ Boddhisatta သည်အသတ်ခံရသောငါးများကိုသာတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်သတ်ဖြတ်ခြင်းတွင်သူမပါဝင်ခဲ့ပါ။ ဤသည်က Akusala လုပ်ရပ်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာအတည်ပြုလိုက်ခြင်းသည်ပင်လျှင်သင်တို့အပေါ်တစ် ဦး တည်းအကြွေးတင်နေသည်။ လက်ဝှေ့သမားတစ် ဦး သို့မဟုတ် bullfight ပွဲကြည့်ပရိသတ်များမှထုတ်ပေးသော akusala ၏ပြင်းထန်မှုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သူတို့ကကြွေးကြော်တယ်၊ လက်ခုပ်သြဘာပေးပြီးသင်တန်းသားများကိုတိုက်ထုတ်ရန်၊ နာကျင်စေရန်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ရန်ပင်လှုံ့ဆော်သည်။ သူတို့ကတစ်ယောက်ကိုအနိုင်ရချင်တယ်၊ နောက်တစ်ခုကိုရှုံးစေချင်တယ်။ ဤရွေ့ကား, လုံးဝကြောက်စရာကြောက်မက်ဘွယ်သောပါ! ထိုသူတို့သည်များစွာသော akusala နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသော karmic အကြွေးတွေစုပြုံ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အတွင်းစိတ်တပည့်နေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညူးရှိသည်အဖြစ်, သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ခံစားနေရပြီးတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်ပြီးတော့, ကမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး! အခြားဘဝမှာနု Boddhisatta လိမ္မာဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြီးတာနဲ့သူတစ်ဦးစိတ်ဆင်းရဲဝမ်းလျှောများအတွက်လူနာကုသရန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အနာရောဂါငြိမ်းစရာပြီးနောက်, ငြိုငြင်ကုသမှုများအတွက်ဆပ်ဖို့တွန့်ဆုတ်ဖြစ်လာသည်။ ဆရာဝန်တစ် ဦး ၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်လူနာများကိုအကျိုးပြုသော်လည်းစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေသောဗုဒ္ဓဘာသာသည်သူ၏လူနာအားသူ့ကိုသေစေသည့်ဆေးဆိုးပေးခဲ့သည်။ အမျက်ဒေါသနှင့်အချည်းနှီးသောအနေဖြင့်ရလဒ်မကောင်းသောအကြံကိုအဘို့, Boddhisatta မရေမတွက်နိုင်တဲ့အသက်ပေါင်းများစွာအဘို့ကိုငရဲ၌ခံစားခဲ့ရသည်။ တောင်မှသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတည်ရှိမှုအတွက်ဗုဒ္ဓနေဆဲပြင်းထန်ဝမ်းလျှောနှင့်အတူဤကြွေးမြီပေးဆောင်အပြီးသတ်ခဲ့ရသည်။ ဘဝသည်အကြွေးနှင့်အကြွေးပြန်ဆပ်မှုအားလုံးဖြစ်သည်။ အတွင်းတပည့်ရှိလျှင်ကံရှိ၏။ Karma ရှိရင်ပေးရမယ့်အကြွေးရှိတယ်။ ဤရွေ့ကားအကြွေးတွေသူတို့ကဒီဘဝကိုကိုယ်နှိုက်အတွက်အပြည့်အဝခုနှစ်တွင်ပေးဆောင်ရနိုင်သနည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး သူတို့ကလာမယ့်ဘဝမှရက်ရွှေ့ဆိုင်းခံရဖို့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်, သင့် Karma ရန်အလွန်လေးနက်သောအာရုံကိုရလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးအပြုသဘော Karma ဖွံ့ဖြိုးလျှင်, သင်တူညီတဲ့ karmic ကြွေးမြီပေးဆောင်။ သငျသညျတခုကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ Karma ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့လျှင်, သင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ karmic ကြွေးမြီပေးဆပ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သံmonာတော်တွေဘာလုပ်ကြမလဲ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် karmic အကြွေးတွေပေးချေ။ အားလုံးကိစ္စများတွင်တစ်ဦးကြွေးမြီတစ်ဦးကြွေးမြီဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြွေးဖြင့်ရောင်းချသည်၊ ကြွေးမြီတစ်ခုလည်းဖြစ်သည် (ဥပမာအားဖြင့်ပရဟိတပေးခြင်းသို့မဟုတ်သားသမီးများ၏အနာဂတ်ကိုလုံခြုံအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်) ။
3 ။ ကျနော်တို့မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကိုကျင့်သောအားဖြင့်အနာဂတျအတှကျယူပါ။
4 ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြွေးတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်မှပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။
အခုငါတို့အားလုံးဟာအကြွေးဟောင်းတွေကိုပြန်ဆပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။ ဒီဟာကမပြီးသေးဘူး သင်လည်းအကြွေးနဲ့ရောင်းပြီးပိုနက်ရှိုင်းတဲ့အကြွေးနွံထဲဝင်ဖို့ပဲတောင်းတယ်။ သင်သည်အခြားသူများအားဒေါသတကြီးစကားပြောသောအခါသင်သည်အကြွေးတင်နေသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကိုလှောင်ပြောင်သည့်အခါသင်၌လည်းအကြွေးရှိနေသည်။
အခြားသူများကိုမောက်မာစွာပြုမူဆက်ဆံပါကသင်၏အကြွေးကိုတိုးစေသည်။ တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့၏ Boddhisatta သည်သီလ၊ ဆာဒီနှင့်ပန်နိ (သီလ၊ အာရုံနှင့်ဉာဏ်ပညာ) တွင်အောင်မြင်ခဲ့သည့်မြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုအရှက် ခွဲ၍ စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ဤအခူဆာလာကြောင့်သူ၏ဗဟုသုတထွန်းကားပြီးနောက်၌ပင်သူသည်အရှက်ရခြင်းနှင့်စွပ်စွဲခံရခြင်းများခံခဲ့ရသည်။ သူကသူ့အကြွေးတွေကိုဆပ်ရတယ်၊
"လူတွေကပါးစပ်တစ်ဦးဓါးနှင့်အတူမွေးဖွားလာနေကြပါတယ်။ မိုက်သောသူသည်နှုတ်တော်မကောင်းသောအကျင့်ကိုတဆင့်ဖြတ်ဖို့ဒီဓါးကိုအသုံးပြုသည်။ "
မင်းဓါးနဲ့ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်ဖြတ်ခဲ့ဖူးလဲ။ မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်မကြာခဏခုတ်ဖြတ်လိုက်ပြီ သင်လုပ်လေလေကြွေးမြီများများများလေလေဖြစ်သည်။ ချေးငွေတစ်ခုထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တွင်သင်၌အကြွေးကိုဆပ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပေ။ ၎င်းသည်သင်၏လက်ရှိဘ ၀ တွင်အတိတ်ကဘဝများ၌သင်စုဆောင်းထားသောကြွေးမြီများကိုပေးဆပ်ရန်သဘောတူခဲ့သည့်အလားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသောစွပ်စွဲချက်များ၊ အရှက်ခွဲခံရမှုများနှင့်စော်ကားမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောအကြွေးများပြန်ဆပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ရဲ့အကြွေးတွေကိုဘုန်းကြီးတွေလည်းပေးရတယ်။ သီလရှင်များ၊ လူဝတ်ကြောင်များ၊ လူတိုင်းသည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြွေးများကိုဆပ်ကြသည်။ သင်၏အကြွေးကိုဆပ်သောအခါမျက်နှာမပျက်ပါနှင့်။ အပြုံးဖြင့်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုငှားရမ်းတဲ့အရာအတွက်သာပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အကြွေးဆပ်ဖို့မကောင်းဘူးဆိုရင်မင်းကကြွေးအသစ်အသစ်ထပ်ထည့်မယ် ကျွန်တော်အကြွေးပိုမယူချင်ဘူး ငါနစ်မြှုပ်ထားပြီးသောအရာများကိုပေးဆပ်ပြီးမှသာအကြွေးကင်းစင်လိုသည်။ သငျသညျအစ karmic ကြွေးမြီအသစ်ကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ငါကဒီပြောပြနေပါတယ်။
ညစ်ညူးခြင်း၏အတွင်းဖြစ်သောတပည့်သည်လည်းကြောက်မက်ဖွယ်မကောင်းသောရောဂါနှင့်တူ၏။ သင်ဖျားနာနေသည့်အခါသင်စိတ်ဆင်းရဲရသည်။ သငျသညျခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်တွင်နှစ် ဦး စလုံး, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါခံစားရသည်။ လောဘကြီးခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းစသည့်ညစ်ညမ်းမှုများသည်သင်၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးသူတို့ကိုမထိန်းကန်ခြင်းနှင့်တွေးတောခြင်းမရှိဘဲနှိုးဆွသောအခါအလွန်ဆိုးရွားသည့်နာမကျန်းမှုကြောင့်သင်ဆိုးရွားစွာခံစားရလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာဖျားနာသူနဲ့တူတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ငါတို့ခံစားရသောအရာများသည်အရသာရှိပြီးချစ်ခင်တွယ်တာမှုနှင့်တပ်မက်မှုတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသည်။ ဤအရာများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှိပ်စက်ခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်စွဲချက်တင်ခြင်း၊ အပြစ်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားညွှန်ကြားသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်အမျက်ဒေါသ၊ မုန်းတီးမှုများနှင့်တုန်ခါနေသည်။ ထိုသို့သောဆင်းရဲဒုက္ခများသည်ပြင်းထန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချည်းနှီးဖြစ်သောမာနထောင်လွှားမှုများပေါ်လာပြီးအခြားသူများကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ခံစားရသနည်း။ အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိပါသလား။ ကျနော်တို့သင်တန်း၏ bubbly နှင့်နာမငြိမ်လာပြီ! ကျွန်ုပ်တို့သည်နာမကျန်းဖြစ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုသမားရိုးကျဆေးဝါးများဖြင့်ကုသနိုင်သည်။ သို့သော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းမှုရောဂါများကိုတစ်ခုတည်းသောကုသနည်းမှာဗုဒ္ဓကသတ်မှတ်ထားသောကုသမှုဖြစ်သည်။ မြင့်မြတ်သောလေ့ကျင့်မှုသုံးခု၏အလေ့အကျင့်သည်ညစ်ညမ်းမှုများခံစားရသည့်ဤကုသမှုဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောအလေ့အကျင့်မရှိဘဲ၊ သီလ၊ သမာဓိနှင့်ပနင်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိပါကအတွင်းတပည့်ဖြစ်သောညစ်ညမ်းသောရောဂါကိုမည်သူမျှမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
အတွင်းတပည့်ဟုခေါ်သောကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောညစ်ညမ်းမှုများသည်လှောင်အိမ်နှင့်တူသည်။ ငါတို့ကမ္ဘာမှာထောင်တွေရှိတယ်၊ ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းကျခံနေရသူတွေရှိတယ်။ ဤသုံ့ပန်းများသည်ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာခံစားနေရသည်။ သူတို့အတွက်မူသူတို့၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ သူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး သူတို့မှာထောင်မှူးကိုနာခံဖို့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏စိတ်ကိုညစ်ညမ်းစေသကဲ့သို့သူတို့၏ချည်နှောင်ခြင်းဖြင့်ချည်နှောင်ထားသည်။ ထောင်ထဲမှာနေတဲ့သူတိုင်းဒုက္ခရောက်နေတယ်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုသည်ထောင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အလိုဆန္ဒနှင့်ပူးတွဲမှု၏အသွင်အပြင်ကလူတစ် ဦး သည် lobha လှောင်အိမ်ထဲသို့ကျရောက်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ ထိုသို့လှောင်အိမ်ထဲသို့ကျသွားသောလူသည် lobha ၏ဆန္ဒနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ရမည်။ တပ်မက်မှုတိုးပွားလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်း၏အလိုဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းရန်နည်းလမ်းအားလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်လာသည်။ ဤအချိန်သည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများဖြစ်ပေါ်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ သင်တပ်မက်သောအရာ၏စစ်မှန်သောသုံ့ပန်းဖြစ်လာသည့်အခါပါပဲ။ သင်၏အလိုဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါသင်ဘာလုပ်သနည်း။ အကြွေးအသစ်ယူနိုင်အောင်အကြွေးအသစ်ယူသလား။ ဖြစ်တည်မှုသည်အလွန်များပြားသောကြောင့်အလွန်လုံခြုံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စွဲမက်မှုနှင့်တပ်မက်မှုပေါ်လာပြီးလောဘတစ်ခုသည်ထောင်ထဲသို့ကျသွားသည်။ ဤအကျဉ်းထောင်ထဲရောက်လျှင်အကျဉ်းထောင်ဒါရိုက်တာ၏အမိန့်ကိုနာခံရန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ သင်လက်စားချေနိုင်သည့်တိုင်အောင်စိတ်ကျေနပ်မှုမရနိုင်သည့်အခါတိုင်း၊ သင်သည်ထောင်ချခြင်းခံရသည်။ ဒေါသနှင့်မုန်းတီးမှုထောင်ထဲတွင်လွတ်လပ်မှုမရှိနိုင်ပါ။ သင်၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုသိမ်းဆည်းထားသောစိတ်ညစ်ညမ်းမှုများချည်နှောင်မှုသည်ဤဘ ၀ ၌သာသင့်ကိုချည်နှောင်ထားသည်မဟုတ်။ သင်သည်အနာဂတ်ဘဝ၌သင်ပေးဆပ်ရန်လိုအပ်သည့်အကြွေးများကိုပေးဆပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဖြစ်တည်မှုအသစ်တစ်ခုစီသည်သင့်အားညစ်ညမ်းသောထောင်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ dosa ထောင်ထဲသို့ ၀ င်ခြင်းသည်ကြွေးမြီများပေးသည့်အပြင်ချေးငွေထုတ်ပေးသည်။ အညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသူတို့သည်အတွင်းတပည့်များဖြစ်ကြပြီးသူတို့သည်ထောင်ကျနေကြသည်။ ပြစ်မှုထင်ရှားကျူးလွန်သောပြစ်မှုကျူးလွန်သူများပင်လွတ်မြောက်မည့်နေ့ကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသောအကျဉ်းထောင်များ၏အကျဉ်းသားများအတွက်သူတို့ကဒီညစ်ညမ်းမှု၏အပိုင်၌နေစဉ်, လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းမှုများကကျွန်များကိုဖြစ်စေသည်။ သငျသညျမာစတာသို့မဟုတ်ကျွန်ဖြစ်လိုပါသလား မင်းအစားသင်ဟာမာစတာတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ် သင်ဟာမာစတာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပေမဲ့သင်ဟာကျွန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေ ဦး မှာပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောအမိန့်များကိုအစေခံ။ လိုက်နာသောသူတို့အားသတ်မှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အတွင်းတပည့်ရှိသူများကိုသာလက်ညှိုးထိုးပြလိမ့်မည်။ မိမိကိုမိမိမချုပ်တည်းနိုင်သော၊ ညစ်ညမ်းသောအမိန့်များကိုသာလိုက်နာသူကိုကျွန်ဟုခေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာကိုနေ့စဉ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါကလူအများစုတို့သည်ညစ်ညမ်းမှု၏အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင်နေထိုင်သောသူများဖြစ်ကြသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ အမျိုးမျိုးသောဖြစ်တည်မှုများ၌စိတ်ပိုင်းညစ်ညမ်းမှုများဖြင့်ကျွန်ခံရသည့်မရေမတွက်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များရှိရမည်။ ဤအချက်ကိုသရုပ်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေးတောဆင်ခြင်သူများအနက်မှတစ် ဦး သည်ကျွန်ဘဝရောက်ခဲ့ပုံကိုသင်ပြောပြပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုရှာဖွေရန်သင်၏အတိတ်ဖြစ်ရပ်များကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်ရမည်။ ငါတို့တရားအားထုတ်သူအချို့သည်သူတို့၏အတိတ်ဘဝများကိုကြည့်ရှုရန်ထိုစွမ်းရည်ကိုအောင်မြင်စွာတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါပြောမယ်အတွေ့အကြုံကဒီတရားအားထုတ်သူတစ် ဦး ရဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။ သူသည်တရားအားထုတ်။ အကြောင်းနှင့်အကျိုးကိုသိနားလည်သောအသိပညာကိုရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဤဗဟုသုတဖြင့်သူ၏ယခင်ဘဝအချို့ကိုတွေ့မြင်ပြီးနောက်သူအလွန်ဝမ်းနည်းလာပြီး၎င်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြလိုသည်။ ဒါပေမယ့်သူကသူအတွေ့အကြုံရဲ့အကျဉ်းချုပ်ကိုသူပို့လိုက်တဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာရေးခဲ့တယ်။ နောက်တော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ထပ်တွေ့ကြပြီးသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်စတင်မေးမြန်းတဲ့အခါသူကငိုချပြီးနှလုံးကြေကွဲနေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ ဘယ်လိုတပည့်မျိုးလဲ၊ အတိတ်ကသူ့ဘဝမှာဘယ်လိုညစ်ညူးမှုမျိုးကိုကျွန်ဘဝရောက်အောင်နှိပ်စက်ခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်။ မင်းကိုသူ့စကားလုံးရဲ့ဘာသာပြန်ကိုဖတ်ပြပါရစေ။
“ ကံကပြောထားသည်နှင့်အမျှလှည်းကိုပစ္စည်းများ တင်၍ တောင်ပေါ်သို့ဆွဲ တင်၍ တောင်ခြေကိုဆွဲတင်ရသည်။ လှည်းပေါ်ရှိအရာများနှင့်အတူလှည်းကိုတင်ပြီးလျှင်ကားကိုအလွန်ဂရုစိုက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လှည်း၏အလေးချိန်သည်ဝန်၏အလေးချိန်နှင့်အတူအလွန်ဖိစီးမှုနှင့်ဖိစီးမှုတို့ဖြင့်ထောက်ပံရန်လိုအပ်သည်။ "
သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာတွေကိုမင်းပြောပြမယ်။ သူ၏အတိတ်ဘ ၀ တစ်လျှောက်တွင်သူသည်မြင်းတစ်ကောင်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ခဲ့၏။ သို့သော်ဤဘဝမတိုင်မီသူသည်အလွန်လှပသောမိန်းမဖြစ်သည်! သူမသည်အရှေ့ပိုင်းမဟုတ်ပါ၊ အနောက်သို့မဟုတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူမသည်အတွင်းပိုင်းတပည့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ကျွန်ဖြစ်ပြီးလောင်းကစားခြင်း၏အစေခံကျွန်ဖြစ်ပြီးမြင်းပြိုင်ပွဲကိုနှစ်သက်သည်။ သူမသည်မြင်းများအများအပြားပိုင်ဆိုင်သည်။ သူမသည်ကြွယ်ဝချမ်းသာသော်လည်းချေးငွေများကိုရရှိခဲ့သည်။ ဘယ်လိုသိလဲ တစ်မြင်းပြိုင်ပွဲပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအားဖြင့်။ သူမသည်သူမ၏မြင်းအဘို့ကြီးသောကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောရှိခဲ့ပါတယ်။ မြင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်ပါဝင်သောအခါ၌၎င်းသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့်တိုင်အောင်မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ပြေးသင့်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအပြေးဖြင့်မြင်း၏ကြွက်သားများသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်တင်းမာမှုများနှင့်အတူတင်းကျပ်။ ဆန့်သည်။ ဧရာမ။ ဒါဟာအလွန်ပင်ပန်းအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးများတွင်မြင်းတစ်ကောင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုပမာဏကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည်မြင်းခြေထောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကြွက်သားများဆန့ ်၍ ကျုံ့သွားခြင်းကိုကြည့်ရှု။ စားသောက်နေသည်။ မိမိအမြင်းအနိုင်ရခဲ့သည့်အခါသူမက exulted ။ သူမသည်အလွန်ကသူ့မြင်းကိုတွဲခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ချမ်းသာပျော်ရွှင်အသက်ရှင်။ , ကံမကောင်းစွာပဲ, သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးတွင်, သူ၏အကြံအစည်သည်သဘာဝကသူ့မြင်းကိုမှ aisles ။ ဒါကြောင့်သူမသေသောနောက်, သူမမြင်းအတွက်စင်ပေါ်! သူ၏မြင်းကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေရန်ပြေးနေသောသူ၏ karmic ကြွေးမြီပြန်ဆပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူဖြစ်လာသောမြင်းသည်လှည်းကိုတောင်ပေါ်သို့ဆွဲတင်ကာတင်ဆောင်ထားသောလှည်းကိုတောင်ပေါ်သို့ထပ်ခါထပ်ခါဆွဲထုတ်ခဲ့ရသည်။ သူဟာအဆက်မပြတ်ပင်ပန်းလေးလံခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောဆငျးရဲဒုက်ခခံစားရတယ်။ မိမိအခွာ, သူ့ပခုံးနှင့်သူ၏ကြွက်သား၌ကြီးသောနာကျင်မှုနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်သူကသူ့ karmic ကြွေးမြီပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်။ အခြားသူများစွာသည်ချိုများ၊ ကျော၊ လည်ပင်းနှင့်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်နာကျင်မှုများကြောင့်သူတို့၏ karmic အကြွေးများကိုဤနည်းဖြင့်ပေးဆပ်ကြသည်။ အတွင်းပိုင်းတပည့်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းရှည်လျားခက်ခဲခရီးအောင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သငျသညျခကျခဲတဲ့ခရီးကိုလုပ်လာတဲ့အခါသင်အမြဲပင်ပန်းခြင်းနှင့်မောခံစားရတယ်။ သင်တစ် ဦး သဲကန္တာရကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါရေနှင့်အစားအစာပြတ်လပ်သွားနိုင်သည်။ ခြေလျင်ဖြင့်သဲသောင်ပြင်ကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ကူးရန်မလွယ်ကူပါ။ အောင်မြင်သူများသည်ကောင်းသော Karma ရှိသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ အလားတူစွာဆာဆာရာသဲကန္တာရကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ကောင်းသောအခြေအနေများအတွက်သဲကန္တာရကိုဖြတ်ပြီးအပြုသဘော Karma တိုးတက်မှုနှင့်အတူသူများသည်။ မကောင်းသောကံကြမ္မာရှိသူများ၊ ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းမှုများဖြင့်နှိမ်နင်းခံသူများသည်အဆုံးမဲ့ဆာဆာရာသဲကန္တာရကို ဖြတ်၍ ရှည်လျားပြီးလှိုင်းထနေသောလမ်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်လှမ်းကြသည်။ သငျသညျအထိသင်သည်လောဘ, မုန်းတီးမှု, လှညျ့စားခြင်း, တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း, ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်း, စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု, အပျြောအပါးများနှင့်နာကျင်မှု၏ညစ်ညမ်းမှုဆက်လက်ရှိနေသမျှ သင်၏အာရုံကိုဖျော်ဖြေနေခြင်းကိုမရပ်ပါနှင့်၊ သင်သည်ဆṃာစာ၌ဤရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောခရီး၌နှစ်ခြင်းခံလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့အစီအစဉ်သံသရာအတွက်အစဉ်အမြဲနေခဲ့လျှင်အဖြစ်နှင့်ပိုသင်တို့သည်ဤအစွန်းအထင်းကိုစောင့်ရှောက်မည်, ပိုငျသညျ, တဖနျနှင့်အဖန်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားလိမ့်မည်။ ဘာဖွစျသင်လိုချင်တာတွေရလာသောအခါ, သင်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်မပျော်ဖြစ်ကြချင်သင်သည်အဘယ်သို့ရကြဘူးသည့်အခါဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျပေါကြွယ်ဝသောအခါသင်တို့သည်ကောင်းသောခံစားရနှင့်သင်သူတို့သည်ဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏အခါသင်မကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်။ ဒါပေါ်မှာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရရှိသောမည်သည့်အရာမဆိုဆန့်ကျင်ဘက်အတိအကျကိုလည်းခံယူရမည်။ အားလုံးကိစ္စများတွင်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့စိတ်ဆင်းရဲမှုများနှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခ၏လောကဓာတ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ တစ်ဦးတပ်မှူးဦးဆောင်သောပြည်တွင်းရေးတပညျ့တျောသညျနှငျ့အတူဘဝကိုကျနော်တို့ကဒီတပည့်များနှင့်မာစတာမပါဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်, သာထို့နောက်ကျွန်တော်တစ်ဦးအပြည့်အဝငြိမ်းချမ်းစွာတည်ရှိမှုကိုဦးတည်ရွှေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်နိုငျသညျ။ karmic အကြွေးတွေကိုထပ်ပြီးထပ်ခါထပ်ခါပေးဆပ်ချင်ပါသလား။ သငျသညျဆṃစာရာမှတဆင့်ဒီပင်ပန်းကြမ်းတမ်း, ညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့်အဆုံးမဲ့ခရီးကိုဆက်လက်လိုပါသလား? သင်ဆဲထောင်ထဲမှာစားပျက်၌သင်တို့၏အနာဂတ်ဘဝကိုဖြုန်းသလား? သငျသညျပြည်တွင်းရေးတပည့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုအကျည်းတန်ရောဂါခံစားနေရပါသလား အစဉ်အမြဲအဘို့လွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘဲဘဝကိုပြီးနောက်အသက်, အတွင်းတပည့်တစ်ဦးကျွန်ဖြစ်လိုပါသလား? အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်လိုချင်သောအရာမဟုတ်ပါကသင်ယခုအချိန်အထိစုဆောင်းထားသည့်ကြွေးမြီများကိုပေးဆပ်ပြီးသည့်နောက်သင်သည်ခရက်ဒစ်အသစ်များမပြုလုပ်ရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ တကယ်တော့, ငါသည်သင်သစ်တွေဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲသင့်ရဲ့အကြွေးတွေအခြေချချင်လျှင်သင်အိမ်ပြန်ကြဘူးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်အကြွေးသစ်များစုဆောင်းခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ဤဘုန်းကြီးကျောင်းသို့သင်မလာခဲ့ဘူးလား။ သင်တို့ရှိသမျှသည် Karma ကြွေးမြီအားလုံးမှလွတ်မြောက်စေလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်လုပ်သင့်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ခြေဆစ်ပတ်လည်ရှိခြေကုပ်များကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းမှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုထောင်ထဲ၌ချုပ်နှောင်ထားသောညစ်ညမ်းမှုများ၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားမည်သည့်ရောဂါများမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားကူးစက်စေသည့်ဤညစ်ညမ်းမှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်စနစ်လျှော့ချသူကို၌တည်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှုငြိမ်းချမ်းသောဖြစ်ရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမအခွင့်အလမ်းထွက်ခွာသည်ကျောက်ကပ်ရရှိထားသူသူမာစတာသူသည်ဤသည်ပြည်တွင်းရေးတပညျ့တျောသညျ။ ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓက ၀ တ္ထု၊ အတွင်းပိုင်းတပည့်ဖြစ်သူပိုင်ဆိုင်မှုသည်စိတ်သောကရောက်ခြင်းကိုသာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုး၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် ၀ မ်းနည်းခြင်း၊ ၀ မ်းနည်းခြင်းတွေမှာပါ ၀ င်ခြင်းမပြုရန်ဗုဒ္ဓကအကြံပြုပါတယ်။ ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းရှိလျှင်၊
အတွင်းဖြစ်သောတပည့် (သို့) အတွင်းဖြစ်သောဥာဏ်ရှိသောသူသည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းကောင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ အတွင်းတပည့်မရှိဘဲကျင့်ကြံသူသည်စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုနှင့်ကျေနပ်မှုကိုခံစားရလိမ့်မည်။ သူသည်ငြိမ်းချမ်းစွာ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်သည်။ "
ထို့ကြောင့်တပည့် (သို့) အတွင်းစိတ်ဆရာမပါဘဲရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်သီလ၊ သမာဓိနှင့်ပုဏ္ဏား (သီလ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဉာဏ်ပညာ) ဟူသောသုံးပါးသောမြင့်မြတ်သောလေ့ကျင့်မှုကိုလုံ့လဝီရိယရှိရှိကျင့်သုံးရမည်။ ဤသူသည်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသော karmic ကြွေးများကိုပြန်ဆပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီ၏ညစ်ညမ်းသောရောဂါကိုကုသနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤသည်သည်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီ၏ညစ်ညမ်းသောထောင်ဒဏ်မှလွတ်မြောက်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်ကျွန်မဟုတ်ဘဲကျွန်ဖြစ်ခွင့်ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အတွင်းတပည့်မပါဘဲတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီသည်သဲအိုင်ကိုဘေးကင်းစွာဖြတ်ကျော်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အတွင်းတပည့်တော်နှင့်သခင်ကိုအပြီးသတ်ဖယ်ရှားနိုင်ပါစေ။
pa ဖားအောက် Tawya, မြန်မာ
သင်ကြားမှုကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံရှိပအုတ်သစ်တောကျောင်း၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သမဏဗြာဟ္မဏဖြင့်ပြင်သစ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုသည်
€ 13 ကနေ 7,45 အသစ်
4 10,85 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 30, 2021 8:07 pm တွင် updated
SOURCE မှ: http://dhammadana.org
အသားအရေအမည်းရောင်အဖြူရောင်မျက်နှာဖုံးများ - Frantz Fanon (အသံ)
အချိန်ခရီးစဉ် - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၆)